Aroosyada 2022 - Isbeddellada waaweyn ee qurxinta | Bezzia
Isbeddellada waaweyn ee qurxinta arooska 2022
Susana godoy | 13/05/2022 16:00 | Aroosyada
Aroosyada 2022 ayaa durba bilaabmaya, marka waa in aan ogaano waxa ay yihiin isbeddellada weyn ee qurxinta ee xaaqaya. Maaddaama ay hubaal tahay inay ku siin doonaan fikrado taxane ah si aad u dhiirigeliso arooskaaga iyaga. Haddii ay yihiin isbeddel, waa baabba' waxayna yihiin doorashooyin wax badan ku siin doona in laga hadlo.
Markaa, haddii aad dhammaan kuwaas rabto maalintaada weyn, kama caawin kartid la kulanka iyaga. Waa run in wax kasta oo ku xeeran arooska ay yihiin kuwo gaar u ah. Markaa waxa ugu fiican ee aan samayn karno waa U fiirso isbeddelladan si ay u noqoto dhiirigelin oo ku dar meherkeena si waafaqsan dhadhankayaga. Hubaal inaad la qabsan karto waxa aad male-awaalayso maalintaada ugu muhiimsan!
1 Iftiin iyo midabyo dabiici ah oo loogu talagalay aroosyada 2022
2 Iftiinka waxaa qaadaya nalalka sudhan
3 Miisaska isku dhafan ee qurxinta arooska 2022
4 Ku sharad inaad martida u habayso qaab asal ah
Iftiin iyo midabyo dabiici ah oo loogu talagalay aroosyada 2022
Mawduuca midabada had iyo jeer waa mid ka mid ah faallooyinka ugu badan. Laakiin kiiskan waxay u muuqataa in ballanqaadka tones dhexdhexaad ah uu si xoog leh u soo socdo. Sidaa awgeed labadaba caddaan iyo beige iyo midabyo fudud ayaa lagu dari doonaa palette ee fursadaha. Sababtoo ah waxa aad rabto inaad ku guulaysato waa meel dabiici ah oo dheeraad ah, oo ku xiran dabeecadda nagu wareegsan. Sababtan awgeed, waxaan ka tagi doonaa midabada ugu caansan si aan u soo saarno meelo badan oo dheellitiran. Dabcan, haddii aad rabto inaad ku darto qaar ka mid ah midabada firfircoon, waxaad ogtahay inaad mar walba la qabsan karto si waafaqsan dhadhankaaga.
Iftiinka waxaa qaadaya nalalka sudhan
Iftiimintu waa qayb ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan marka ay timaado qurxinta arooska. Sababtoo ah waxaan u isticmaali karnaa si aan xitaa caan uga siino xafladda. Sii wadida dhamaystirka dabiiciga ah, waxaan wajahaynaa ikhtiyaarka meesha Laambadaha laalaada ayaa noqon doona jilayaasha dhabta ah. Laakin ma aha mid aad u iftiimaya, laakiin waxay yeelan doonaan dhammayn quraarad ah oo ka dhigaya dhamaystirka ugu quruxda badan. Dabcan, shumacyadu waxay sidoo kale noqdaan mid kale oo ka mid ah faahfaahinta muhiimka ah. Si aanay wax dhibaato ah u jirin, waxaad ku dhejin kartaa gudaha weelasha dhalada, siinta qurxinta hawo aad u casri ah.
Miisaska isku dhafan ee qurxinta arooska 2022
Dhawr sano hadda, waxay rabaan inay jebiyaan borotokoolka. Tan iyo markii shaygan haysta miisaska dhaadheer, had iyo jeer laga soocay aroosadda iyo aroosadda, mar walba ma aha wax soo afjaraya in la jeclaado xaalado badan. Sidaa darteed, waxaa jiri kara isku-dhafka labadaba miisaska dheer iyo kuwa wareegsan. Waxaa intaa dheer, in muddo ah ayaa hadda oo ay u muuqataa in ay sii wadi doonto guusha. Ka sokow, Arooska iyo arooska mar walba lama fadhiisto ilaahyada, laakiin mar kasta oo aad aragto inay keligood miis wada fadhiyaan. laakiin u dhow martida, ama xitaa midba midka kale. Had iyo jeer waa inaad doorataa waxa ugu wanaagsan lammaane kasta, laakiin waa run in borotokoollada ay u muuqdaan kuwo dhinac laga tagay.
Ku sharad inaad martida u habayso qaab asal ah
Waxaa meesha ka baxay miisaska tirooyinka lahaa oo mid kasta oo ka mid ah dhowr marti ah ayaa isugu yimid. Waa hagaag, asalnimada ayaa la dhigaa aroos kasta oo is-ixtiraam leh. Sidaa darteed, halkii tirooyinkan waxaad mar walba gelin kartaa iyadoo la saarayo miis kasta cinwaannada heesaha ama filimada iyo xitaa magacyada jilayaasha. Wax kastaa way socdaan ilaa inta ay tahay in la dhamaystiro fikradda si asal ah. Waxay u muuqataa in sannad kasta hal-abuurnimadu ay nagu jirto dhinaceena oo male-awaal yar ay weli noqon karaan kuwo ka badan guulo. Si la mid ah, waxaad had iyo jeer dhigi kartaa guf meesha aad ku daabacdo liiska oo dhan oo leh magacyo ama, miis kasta, waxaad dhigtaa faahfaahin qeexaysa magaciisa. Taasi miyaanay u ekayn fikrad fiican? Markaa waxaad u tagi kartaa qurxinta arooska 2022
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » Aroosyada » Isbeddellada waaweyn ee qurxinta arooska 2022
Godadka dabka ee bannaanka si ay u kululeeyaan barxaddaada ama beertaada
Waa maxay qaliinka refractive?